Poor Bowel Control · Continence Foundation of Australia
Home > Other Languages > Somali > Fact Sheets > Poor Bowel Control
Kontoroolka Caloosha Ee Xun
Waa maxay kontoroolka xun ee caloosha?
Dadka qaba kontoroolka caloosha ee xun waxay si kedis ah u soo dhaaftaa socodka calooshu wakhti khaldan ama meel khaldan. Waxaa sidoo kale laga yaabaa inay ka timaado dhuuso markayna ula jeedin.
Caloosha kontoroolka xumi ma caambaa?
Qiyaastii hal 20tii qof ayaa leh caloosha kontoroolka xun. Labadaba raga iyo dumarka way yeelan karaan kontoroolka xun ee caloosha. Aad ay u tahay caam u ah markaad weynaato, laakiinse dad badan oo dhalinyaro ah ayaa sidoo kale qaba kontoroolka xun ee caloosha.
Dad badan oo qaba kontoroolka xun ee caloosha ayaa sidoo kale qaba kontoroolka xun ee kaadi heysta (oo isqoynaya).
Maxaa sababa kontoroolka xun ee caloosha?
Muruqyo daciif ah
Muruqyada marinta danbe oo daciifa ayaa laga yaabaa inay sababtay:
noocyo ka mid ah qaliinka – sida,baawasiirka (haemorrhoids); ama
dabeecad ku daaweynta falaaraha.
Shubanka micnahiisu waxaa weeye socodka caloosha oo debecsan. Waxaa jira sababo badan waana fikrad wanaagsan inaad u tagto dhakhtarkaaga si aad u ogaatid waxaad ka qaban kartid dhibaatadan.
Caloosha oo fadhida
Caloosha oo fadhida waa wax caam ah oo sababa nasiib xumo oo dadka waa weyn ah ama dadka qaba iinta. Socoshada caloosha waxaa marmarka qaarkood laga yaabaa inay ku xirmaan caloosha ta hoose dareerahuna wuxuu ka da’i karaa hareeraha wax isku dhegan, oo u eg inay jirto luminta kontoroolka caloosha.
Maxaad ka sameynaysaa waxa ku saabsan kontoroolka xun ee caloosha?
Waxaa jira waxyaalo badan oo sababa kontoroolka xun ee caloosha, sidaa daraadeed waxaa loo baahan yahay hubin taxadar leh si loo helo waxyaalihii sababay iyo waxyaalaha laga yaabo inay sii xumeynayso.
Haddii aad badanaa leedahay nasiib darada xun ee caloosha, waa inaad marka hore la hadashaa dakhtarkaaga. Waa inaad sidoo kale u sheegtaa dhakhtarkaaga haddii aad leedahay:
isbedelka dabeecada caadiga ah ee caloosha;
xannuun ama dhiigida marinka danbe;
dareen ah in calooshaadu aysan weligaa faaruqin;
shubanka caloosha ee madow ama dhuxusha ah; ama
Miisaan aadan sharxi karin sababta uu kaaga dhacay.
Dhakhtarkaaga waxaa laga yaabaa:
inuu ku weydiiyo waxoogaa su’aalo ah;
inuu sameeyo baaritaan jireed oo ah muruqyada sagxada miskahaaga (haddii aad tiraahdo taasi okay);
inuu ku weydiiyo inaad sameyso shaxda dabeecada calooshaada iyo waxaad cunto ama cabto ilaa wakhti; ama
Inuu kuu gudbiyo iskaanka ultrasound si uu u hubiyo muruqyada sagxada miskahaaga.
Sidee Baa Loo Caawin Karaa Caloosha Kontoroolka Xun?
Sababtoo ah luminta kontoroolka caloosha waa calaamad digniin ah ee ma aha cudur, daryeelka ugu fiican wuxuu ku xirnaan doonaa waxa sababaya dhibka.
Daryeelka waxaa laga yabaa inuu ka mid yahay:
hubinta daawooyinka iyo kiniiniga aad qaadato;
qaadashada daawo cusub si aad u adkeyso socoshada calooshaada ama aad u dejisid calooshaada;
ka adkaanta caloosha ku fadhida haddii ay tani tahay waxa sababay;
ababarida muruqyada sagxada miskaha si ay kaaga caawiso muruqyada sagxada ee misigta in la xoojiyo. Muruqyada ku wareegsan marinka danbe waa qaybo ka mid ah muruqyada sagxada misigta;
daaweynta dabiici-ku-daaweeyaha ama kalkaaliyaha ceshadka kaadida iyo saxarada oo wax ka yaqaan dhibaatooyinka muruqyada sagxada misigta ku saabsan. Tani waxay sidoo kale ku lug yeelanaysaa isticmaalka qalab si aad uga shaqeysiiso muruqyada sagxada miskalaha; ama
Booqashada dakhtarka qaliinka ama dakhtar kale oo takhasus leh, haddii dakhtarkaagu kuu gudbiyo.
Dadka Qaba Ilowga Ama Wareerka
Dadka qaba ilowga ama wareerka waxaa laga yaabaa inaysan dareemin, amase aynaan ka warqabin, rabitaanka inaad faaruqiso calooshaada. Tani waxay kuu horseedi kartaa wax siideynta ficilka caloosha caadiga ah. Wakhtiga caamka ah ee ay tani dhacdo waa isla markiiba cuntada ka dib, badanaa quraacda.
La socodka qofka dabeecadiisa caloosha ilaa wakhti ayaa laga yaabaa inay caawiso inay tusto wax israacsan oo ku saabsan dabeecada caloosha. Sidoo kale, la socodka fal celintooda ayaa laga yaabaa inay caawiso in la ogaado marka uu dhacayo socodka shubanka ee calooshu.